हाँस्य–ब्यंग्य क्षेत्र: महिला कलाकार छाँयामा किन ? | Tungoon
काठमाडौं । कुनै बेला नेपाली फिल्ममा ‘कमेडी’ अर्थात् हाँस्य विधालाई एक सहयोगी अंगको रुपमा लिइन्थ्यो । जसलाई फिल्ममा बाँकी रहेको समयलाई पूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा लिइन्थ्यो । फिल्ममा हाँस्य विधालाई गौणरुपमा हेरिन्थ्यो । हाँस्य कलाकारहरू पनि औंलामा गन्न पुग्ने संख्यामा मात्र थिए । तर अब हाँस्य ब्यंग्य कुनै पनि फिल्मको एक हिस्सा मात्र भएर रहिरहन सकेन । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा यसले आफ्नो परिचयलाई नै बदलिदियो ।
सर्वसाधारण र फिल्मी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बुझ्दै आएका हाँस्य ब्यंग्यको धारणामा नै व्यापक भिन्नता आएको छ । पहिलेका फिल्ममा चंखे, वसन्तेलगायतका पात्रको अभिनय गरेर दर्शकहरूलाई हँसाउने कलाकारहरूले यहाँसम्म आइपुग्दा फिल्मको प्रमुख अभिनेता बनेर दर्शकलाई हँसाउन सक्ने भएका छन् । यसलाई भने नेपाली फिल्म उद्योगले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सक्छ ।
यद्यपि महिला हाँस्य कलाकारहरू भने सधैं छाँयामा परे । बसुन्धरा भुषालदेखि अहिलेको दीपाश्री निरौलासम्म आइपुग्दा बसुन्धरा गोपालराज मैनाली र दीपाश्री दीपकको छाँयामा परिरहे । कलिउडले यसलाई चाहिं चिन्ता गर्नुपर्ने विषयको रुपमा लिँदा राम्रो होला ।
हाँस्य विधालाई नै फिल्मको प्रमुख पक्ष बनाएर फिल्म निर्माण गरिरहँदा यसले हिरोको धारणामा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । एकताका हिरो हुनका लागि कसिलो शारीरिक बनावट, सिक्स प्याक र आकर्षक लुक्स प्राथमिकतामा पर्ने गर्दथ्यो तर अब यी धारणा र सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ । दर्शकलाई हँसाएर पनि फिल्मको हिरो हुन सकिन्छ भन्ने बुझाईले नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा हाँस्य विधाको सम्भावनालाई प्रबल देखाएको छ ।
यसकै उदाहरणका रुपमा हेर्दा कुनै समय टेलिभिजनमा हाँस्य श्रृंखला चलाएर चर्चामा आएका कलाकारहरू चलचित्रमा पनि उत्तिकै दरिलो साबित भएका छन् । द्वन्द्वकालको परिवेशलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको ‘वडा नं ६’ र वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक प्रभावलाई लिएर निर्माण गरिएको ‘छक्कापञ्जा’ लाई यसकै गतिलो प्रतिफलका रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले कमेडीलाई नै आधार बनाएर फिल्म बनाउने लहर चलेको छ भन्न कुनै अत्युक्ति नहोला ।
नेपाली फिल्ममा हाँस्य ब्यंग्य विधामा पहिलेको र अहिलेको पात्र, विषयवस्तु र अवस्थाका बारेमा यही क्षेत्रमा भिजेका र यसलाई नजिकैबाट देखेका कलाकारहरूलाई सोध्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. मदनकृष्ण श्रेष्ठ
हाँस्य कलाकार, गायक र लेखकका साथै नेपाली हाँस्य विधा क्षेत्रमा चर्चित र लोकप्रिय नाम हो । अभिनय गर्ने शैलीका कारण उनलाई हाँस्य विधा क्षेत्रको उत्कृष्ट कलाकारका रुपमा लिइन्छ । ‘मह’ जोडीका रुपमा चिनिने उनको जोडीको नाम भने हरिवंश आचार्य हो ।
उनका अनुसार, पहिलेका फिल्ममा हाँस्य कलाकारहरूलाई फिल्मको समय पूर्ति गर्ने पुरकका रुपमा लिइन्थ्यो । त्यो पात्र बीचबीचमा हराउँथ्यो पनि । हाँस्य कलाकारहरूलाई खासै महत्व दिइन्नथ्यो । तर अहिले भने हाँस्य व्यंग्यका क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । अहिले यो विधालाई पनि प्राथमिकता दिन थालिएको छ । कुनै कुनै फिल्ममा त हाँस्य ब्यंग्यलाई नै प्रमुख विधाको रुपमा उभ्याउने अवस्थासम्म आइसकेको छ । यसबाट पहिलेको र अहिलेको हाँस्य व्यंग्यको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक सुधारका बारेमा थाहा हुन्छ ।
२. हरिवंश आचार्य
मदनकृष्ण श्रेष्ठको जोडीको नाम हरिवंश आचार्य हो । अभिनेता, हाँस्य अभिनेता, गायक र लेखकको छवि बनाएका आचार्य पनि नेपाली हाँस्य व्यंग्य विधाका सफल र चर्चित व्यक्ति हुन् ।
अहिले विषयवस्तुमा पनि फरकपना पाइन्छ । हाँस्य कलाकारलाई नै लिड रोलमा लिएर पनि फिल्महरू बनेका छन् । पहिले–पहिलेको फिल्ममा यो विधा सीमित थियो भने अहिले निकै फराकिलो भएको छ । त्यसैगरी अहिले यो क्षेत्र पनि व्यवसायिक भइसकेको छ । अहिले ‘मह’ जोडी फिल्म दाल भात तरकारीमा व्यस्त छ ।
३. सन्तोष पन्त
सन्तोष पन्त पनि नेपाली हाँस्य ब्यंग्यको क्षेत्रमा चर्चित र सफल नाम हो । समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित भएर बनाइएको ‘हिजो आजको कुरा’ ले यिनलाई नेपाली हाँस्य विधामा निकै रुचाइयो ।
सन्तोष पन्त भन्छन्,‘पहिले र अहिलेको तुलनामा हाँस्य व्यंग्यका क्षेत्रमा निकै भिन्नताहरू पाउन सकिन्छ ।’ पहिले राजनीतिक विषयमा व्यंग्य गर्दा निकै घुमाउरो पाराले गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले निकै सहज अवस्था छ । अहिले जुनसुकै विषयमा पनि ब्यंग्य गर्न सकिने अवस्था आएको छ । यद्यपि कुनै कुनै फिल्ममा मात्र हाँस्य ब्यंग्यलाई जोड दिइएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने पहिलेको तुलनामा अहिले हाँस्य व्यंग्य विधाले ठूलै फड्को मारेको मान्नुपर्छ ।
४. दीपकराज गिरी
लोकप्रिय र चर्चित हाँस्य श्रृंखला ‘तीतो सत्य’ले हाँस्य विधाको क्षेत्रमा स्थापित गराएको कलाकारको नाम दीपकराज गिरी हो । आजसम्म आइपुग्दा उनले अभिनय, निर्देशन र रेडियो प्रस्तोताको रुपमा राम्रो उपस्थिति देखाइसकेका छन् ।
दीपकराज गिरीकै भनाईमा पहिला अचारका रुपमा मात्र रहेको हाँस्य ब्यंग्य अहिले बृहत् भएको छ, अर्थात् यसलाई अहिले भातकै रुपमा लिन सकिन्छ । यसैगरी पहिला राजनीतिक विषयमा ब्यंग्य गर्दा सेन्सरसीपको डर हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, जुनसुकै विषयमा हाँस्य ब्यंग्य गर्न सकिन्छ । पहिलेका कलाकारहरूले बाटो बनाइदिनुभयो र अहिले हामीहरू त्यसलाई पिच गर्दैछौं ।
५. केदार घिमिरे
टेलिभिजनको हाँस्य श्रृंखलामा ‘माग्ने बुढा’को रुपमा परिचय बनाएका केदार घिमिरे पनि अहिले धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल कलाकार हुन् । हाँस्य टेलिश्रृंखला मेरी बास्सैबाट चर्चामा आएका घिमिरे आज सफल कलाकार र गायकका रुपमा पनि चिनिन्छन् । यसका साथै उनी विल्सन विक्रम राईको सहकार्यमा हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘खासखुस’ मा सक्रिय भएका थिए ।
त्यसैगरी केदार घिमिरेले पनि पहिलेको र अहिलेको अवस्था धेरै भिन्नता पाएका छन् । पहिलेका फिल्ममा हाँस्य कलाकारहरूलाई जोकरका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो र उसलाई खासै महत्व पनि दिइँदैनथ्यो । यसका साथै पहिलेका फिल्ममा केवल हाउभाउ र अनौठा व्यवहार प्रयोग गरेर दर्शका हँसाइन्थ्यो । उदाहरणका लागि सुरुवालको तना खुस्काउने, अनौठो रुपमा प्रस्तुत हुने जस्ता क्रियाकलाप गरिन्थ्यो । तर अहिले अभिनेताकै रुपमा भूमिका निर्वाह गरेर नै दर्शकहरूलाई हँसाइन्छ ।
६. जितु नेपाल
टेलिश्रृंखलामा ‘मुन्द्रे’ को भूमिका निर्वाह गरेका चिनिएका जितु अहिलेका व्यस्त कलाकारका रुपमा पनि गनिन्छन् । यसका साथै प्रहसनमार्फत् पनि यिनले निकै राम्रो परिचय बनाइसकेका छन् । अहिले उनी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ मा प्रस्तोताका रुपमा व्यस्त छन्, जसलाई निकै रुचाइएको पनि छ ।
सामान्य पात्रका रुपमा देखाइने र सहायक भूमिकाका रुपमा देखिने हाँस्य कलाकारहरू नेपाली फिल्ममा अहिले प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएका छन् । यो चाहिं हामी कलाकारहरूले गर्व गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैगरी पहिलेका फिल्ममा हाँस्य कलाकारहरू चम्चे, भिलेन र कमसल पात्रको रुपमा देखिन्थे भने अहिले त्यस्ता पात्रहरू नै अभिनेता बनेका छन् । साथै विषयवस्तु पनि धेरै प्रकारका छन् । यसले हाँस्य व्यंग्य क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने काम गरेको छ ।
७. सिताराम कट्टेल
टेलिभिजनमा ‘सुन्तली’ पात्रको जोडीका रुपमा देखिने सिताराम कट्टेललाई ‘धुर्मुस’ पात्रले नै आजको स्थानमा उभ्याइदिएको हो । एउटा राम्रो कलाकार मात्र नभएर उनी समाजसेवी रुपमा पनि चिनिएका छन् । ‘धुमुर्स–सुन्तली फाउन्डेशन’ खोलिसकेपछि यिनले त्यसतर्फ पनि सक्रिय रुपमा नै समय दिन थालिसकेका छन् ।
उनका अनुसार, अहिले हाँस्यब्यंग्य राम्रो फस्टाएको क्षेत्र हो । टेलिभिजनमा मात्रै सीमित भएको हाँस्य ब्यंग्य फिल्मसम्म आइपुगेको छ र यसलाई उपलब्धिको रुपमा नै लिनुपर्छ । अहिले यस विधामा नै आधारित भएर फिल्म पनि बन्न थालेका छन् । त्यसैगरी विषयवस्तु र पात्रका विषयमा पनि निकै भिन्नता पाउन सकिन्छ । पहिलेका फिल्ममा सामाजिक परिवशेमा मात्र रहेर ब्यंग्य गरिन्थ्यो भने अहिले सामाजिकलगायत समसामयकि, राजनीतिक जस्ता विषयमा पनि हाँस्य ब्यंग्य गर्न पाइन्छ ।
यी सबै कलाकारहरूको भनाई र विचारलाई एकीकृत गर्ने हो भने नेपाली फिल्ममा हाँस्य ब्यंग्य गर्ने कलाकारहरूको अवस्थामा निकै भिन्नता र सुधार आएको छ । हाँस्य ब्यंग्य गरेर नै बाँच्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि भने कलाकारमा सिर्जनशीलता र साधना हुन भने जरुरी छ ।
Previousअप्रेशन कक्षमा डाक्टर र नर्सः अवस्था यस्तो छ ! भिडियो भाइरल
Nextमन्त्रीको चेपुवामा परेका सहसचिव भन्छन्: ‘मेलम्ची अलपत्र, मन्त्री र सचिवको चलखेल’